February 26, 2021 - Page2of3- Babal Khabar
ओली समूहले पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई बनायो
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहका नेता गुरुङलाई हटाएर ओली समूहका विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनाइएको छ । ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले भट्टराईलाई नियुक्त गरेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । प्रदेश १ का सांसदहरूकाे भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर भट्टराईलाई नियुक्त गरेको जानकारी गराएको नेम्वाङले बताए ।
अमेरिकी हवाई कारबाहीमा सिरिया , इरान समर्थक १७ लडाकू मारिए
एजेन्सी, १४ फागुन । सिरियामा भएको अमेरिकाआवद्ध हवाई कारबाहीमा परी इरान समर्थक कम्तीमा १७ लडाकू मारिएका ‘द सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युम्यान राइट्स’ले शुक्रबार जानकारी दिएको छ । इरानको सीमा क्षेत्रमा पर्ने सिरियाली क्षेत्रमा सो हवाई कारबाही भएको थियो । पहाडी इलाकामा भएको यस हवाई कारबाहीमा तीन वटा ट्रकहरू ध्वस्त भएको बताइएको छ । अब्जरभेटरी प्रमुख रामी अब्दुल रहमानले एएफपीलाई इरान समर्थक १७ लडाकू मारिएकाे पुष्टि गरेका छन् । यस समाचारको विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन् । सिरियामा सन् २०११ को मार्च महिनाबाट त्यहाँका राष्ट्रपति बसर अल असदको राजिनामाको माग गर्दै जनआन्दोलन शुरु भएको थियो । यो जनआन्दोलन केही समयपछि गृहयुद्धमा परिणत भएको थियो । सो गृहयुद्ध इस्लामिक स्टेट्स (आइएस) र अल कायदा जस्ता आतङ्ककारी समूहहरु हाबी हुदै गएका थिए । यिनै आतङ्ककारी समूहहरुलाई कारबाही गर्ने क्रममा अमेरिकाले हवाई
प्रचण्ड नेपाल यस्तो ठुलो राजनीतिक धर्म संकटमा
काठमाडौं । नेकपाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले प्रचण्ड नेपाल ठुलो राजनीतिक धर्म संकटमा फसेको बताउनु भएको छ । उहाँहरु केपी ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार्न पनि नसक्ने, सार्वजनिक रुपमा भावी प्रधानमन्त्री म हुँ भनेर बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको बस्नेतको आरोप छ । बस्नेतले कांग्रेसलगायत अन्य दलका नेतालाई उचालेर प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने उहाँहरु ठुलो राजनीतिक संकटमा फसेको बताउनुभयो । ‘सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि उहाँहरुले लड्डु खाएर रातो पोतेर विजय जुलुस त मनाउनुभयो’ बस्नेतले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु पार्टीभित्र एक भएर बस्न पनि नसक्ने र फुटेको पनि भन्न नसक्ने गोलचक्करमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइनसकेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर उहाँहरुले अराजनीतिक कुरा गरेको बस्नेतले आरोप लगाउनुभयो ।’पछिल्ला गतिविधिले उहाँहरुको राजनीति नैतिक रुपले
नेकपा विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कुनै पक्षसँग सहकार्य नगर्ने : काङ्ग्रेस
babalkhabara / १३ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कुनै पक्षसँग सहकार्य नगर्ने भएको छ । बिहीबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकमा संसद पुनर्स्थापना भएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा भएको थियो । बैठकमा सभापति देउवाले नेकपाको दुबै पक्षबाट सहकार्यको प्रस्ताव आएको भन्दै राय मागेका थिए । नेकपाको विवाद अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कांग्रेस कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिन सक्दैनौं भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो’ बैठकपछि नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनलाइनखबरसँग न भने । जनताले पनि प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेट दिएको भन्दै नेताहरुले सरकारमा जान हतार गर्न नहुने बताएका छन् । नेकपा विभाजन भएर सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आए मात्र यसबारे पार्टीमा छलफल गर्नु उपयुक्त हु
प्रवक्ता श्रेष्ठले संसदको अधिवेशन, सरकार, संविधानको कार्यान्वयन, समृद्धि लगायतको बिषयमा गम्भीर चुरो खोले
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलापछि अहिले समाजवादको आधार तयार गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने तिर केन्द्रीत भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् प्रवक्ता श्रेष्ठले संसदको अधिवेशन, सरकार, संविधानको कार्यान्वयन, समृद्धि लगायतको बिषयमा गम्भीर छलफलमा केन्द्रीत भएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला पछि अहिले हामी संसदको अधिवेशन, सरकार, संविधानको कार्यान्वयन, समृद्धि, समाजवादको आधार निर्माण र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन लाई कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर छलफलको संवेदनशील मोडमा छौं’ उनले लेखेका छन्। उनले सञ्चार माध्यमका आ–आफ्ना विश्लेषणलाई यथोचित सम्मान गर्दै सकारात्मक सन्देश छन् भने त्यसलाई ग्
उर्लाबारी मृत्यु प्रकरणमा बहिनीको साहशिले नै मुद्दा अदालतमा
मोरङ — सदीक्षा बाँस्तोला अमेरिकाको टेक्सासमा पाइलटको तालिम लिइरहेकी थिइन् । पुस ५ गते राति अचानक फोनको घण्टी बज्यो । त्यसपछि जुरुक्क उठेकी उनी अहिले पनि राम्ररी सुत्न सकेकी छैनन् । दाजु प्रवीणको मृत्युको खबरले उनी घर फर्कने तयारीमा लागिन् । र, तीन दिनपछि उर्लाबारी आइपुगिन् । ‘सक्नै लागेको पढाइ गर्न त जीवन बाँकी छ । तर एक्लो दाजुको मुख फेरि हेर्न नपाउने भएकाले तत्काल प्लेन चढेर आएँ,’ उनले भनिन्, ‘घटनाबारे बुझ्दा दाजुको सामान्य मृत्यु नभई हत्या नै भएको निष्कर्षमा पुगें । पटकपटक गएर इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा बुझ्दा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने तर किटानी जाहेरी लिन नमान्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै किटानी जाहेरी लियो । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भन्दै दुई पटक फाइल फिर्ता गरेको पनि जानकारी पायौं ।’ हत्या घटना भए पनि प्रहरीले संलग्न भएको आरोप
नेपालका लागि चीन र भारतका राजदूतहरु एकै दिन देउवालाई भेट्न पुगे
babalkhabar / काठमाडौं, फागुन १४ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नेपालका लागि भारत र चीनका राजदूतले एकै दिन फरक÷फरक समयमा भेटघाट गरेका छन्। बिहीबार देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक सम्पन्न भएपछि दुई देशका राजदूतसँग भेटघाट गरेका हुन्। भेटमा के बिषयमा छलफल भएको हो भन्नेबारे भने सार्वजनिक गरिएको छैन । ५ पुषमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको संसद् विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेपछि सरकार परिवर्तन हुन लागेका बेला दुई छिमेकीले देउवालाई भेट्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ। दुई भागमा विभाजित नेकपाले कांग्रेसको सहाराबिना सरकार गठन सक्ने छैनन् र पुनः दुई नेकपा एक भएर अघि बढ्ने सम्भावना नै छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसकै सहारा महत्वपूर्ण रहेको भएको छ ।
जसपा का नेता राजेन्द्र महतोको प्रचण्ड – नेपाल लाई तपाईंको कुन पार्टी हो ?
संसद पुनर्स्थापनापछि दलहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको प्रचण्ड–माधव समूहका शीर्ष नेताले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा नेकपा प्रचण्ड– माधव समूहलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्र महतोले तपाईंको कुन पार्टी हो ? पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नेता महतोले प्रचण्ड– माधवलाई अलमलको अवस्थामा आफूहरु प्रष्ट भएर आउन सुझाव दिएको सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘उहाँहरु (प्रचण्ड–माधव) ले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्नु हुँदैथ्यो, सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुरा राख्नु भयो,’ नेता महतोले भने, ‘हामीले के जिज्ञासा राख्यौं भने, तपाईंको कुन पार्टी हो ? पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त ? त्यो के हो त ? यो बडा अलमलमा प¥यो के ? त्यो प्रष्ट हुनुस् भन्यौं ।’ प्रचण्ड–माधव समूहले छलफलमा राखेका सबै कुराहरु पार्टीको बैठकमा राखौंला भन
‘ओली राजीनामा दिन छाडेर फेरि आसबैधनिक खेलमा लागे’ – उपेन्द्र यादव
इलाम, १४ फाल्गुन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले देशलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचाएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत कदम चालेको कुरा सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । यो निर्णयले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र झन् बलियो बनेको नेता यादवको भनाइ थियो । जसपा इलामले बिहीबार इलाम सदरमुकाममा गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवाद, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको रक्षा गरेको र अदालतको फैसलाले मुलुकलाई द्वन्द्व र संकटबाट जोगाएको उल्लेख गर्नुभयो । दिनरात लोकतन्त्र र संघीयतालाई समाप्त पार्ने खेलमा लागेर प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख बन्न संसद् विघटन गरे पनि अदालतले ओलीको त्यो सपनालाई चकनाचुर पारिदिएको यादवको भनाइ थियो । उहाँले अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलील
अब एमसीसी पास गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ,संसदबाटै ढुक्कले पास हुन्छ : नेता खनाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड-नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मिलिनियम च्यालेन्ज करर्पोरेशन (एमसीसी) अब संसदबाटै पारित हुने बताएका छन । बुधबार इमेज एफएमसँको कुराकानीमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले एमसीसी संसदबाट पारित हुने बताएका हुन । उनले एमसीसीमा केही सुधार भने गरिने बताए । यसअघि एमसीसीको कट्टरबिरोधीका रूपमा देखिएका खनालले अहिले अमेरिकामा पनि जोवाइडेनको नेतृत्व आएको बताउँदै एमसीसीमा सामन्य परिमार्जन गरेर संसदबाटै पारित गराउने बताए । उनले पार्टीको विवादका सम्बन्धमा कुरा गर्दै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै पनि एकताको सम्भावना नरहेको बताए । उनले ओली बहेकका नेताहरूलाइ भने पार्टीमा स्वागत गरिने बताए । करिब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा करिब रु ५१ अर्ब अमेरिकी र रु १३ अर्ब नेपाल सरकारको लगानी गर्ने बताइएको छ । दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर